Tsena-barom-panjakana isam-paritra Ho voafehy ve ny kolikoly ?
Nanambara ny Praiministra Ntsay Christian omaly manoloana ireo depiote fa anisan’ny fiovana goavana hatomboka amin’ity taona ity ny famindrana ny fitantanana ny tsena-baro-panjakana any amin’ny faritra toy ny fananganana sekoly sy tsena ary biraom-panjakana isan-karazany.
Ka ho any amin’ny faritra no hatao ireo fitaomana ny tolo-bidy (Appel d’offre) anatiny isan-karazany mba ho tena tompon’andraikitra amin’ny fampandrosoana ireo any amin’ny faritra. Izany dia mba ahafahan’ireny orinasa madinika sy salantsalany tsy miankina ireny any amin’ny faritra mba mandray anjara amin’ireny tolo-bidim-panjakana ireny. Namafisin` ny filoha Rajoelina rahateo izany nandritra ny lahateny nataony tamin` ny alahady lasa teo. Miroso tokoa amin` ny fitsinjaram-pahefana isika saingy ahoana ny fanaraha-maso an` ireo olom-boafidy? Ho tohizana ny famatsiam-bola eo amin’ny CLD (Comité local de developpement) ary hitondrana fantsarana ny rijan-teny mifehy manokana azy mba hampahomby azy bebe kokoa kanefa iaraha nahita ireny tsy fifandrindrana teo amin` io resaka CLD io ka miteraka korontana eo amin` ny depiote sy ny ben` ny tanàna. Ohatra fotsiny ny fifandirana teo amin` ny depiote voafidy tany Antsiranana sy ny ben` ny tanàna any an-toerana. Misy ihany koa ny kolikoly amin`ireny tolo-bidim-panjakana ireny. Ity farany anefa dia mbola lavitry ny afo ny kitay ny fifehezan-tsika azy io.